japanSamachar | जापान जानकारी | जापानको पीआर लिन खोज्दै हुनुहुन्छ ? यि हुन नयाँ नियमहरु !
(Japan)7th May | 2021 | Friday | 7:59:23 PM || (Nepal) 4:44:23 PM
जापानको पीआर लिन खोज्दै हुनुहुन्छ ? यि हुन नयाँ नियमहरु !
POSTED ON : Sunday, 27 December, 2020 | Views : 500
जापानका स्थायि रेसिडेन्सी (पीआर) का विषयमा यसअघिका लेखहरुमा पनि धेरै जानकारीहरु हामीहरुले लेखिसकेका छौं । सो सम्बन्धी निर्देशिका यसै वर्षको मे महीनाको अन्त्यतिर संसोधन गरिएको थियो । र नयाँ निर्देशिका अनुसार पीआर आवेदनका लागि नयाँ दस्तावेजको आवश्यकता पर्ने अध्यागमन विभागले घोषणा गरेको छ ।
सन् २०१९ को जुलाई १ तारिकदेखि देखि नयाँ दस्तावेजको आवश्यकता लागू भएको छ । जुन महिनाको अन्त्यतिर पीआर आवेदन बुझाइसकेकाहरुलाई अतिरिक्त दस्तावेज बुझाउन पनि भनिन सक्ने बताइएको छ ।
एकपटक स्थायि भिसा पाइसकेपछि आफ्नो भिसाको अवधि थपिरहनु पर्दैन । त्यसको म्याद सकिनु अगावै त्यसलाई नवीकरण मात्रै गरे पुग्छ । गैरकानूनीबाहेक तपाइले जुनसुकै काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो बसाइ सराइ बारे जानकारी दिइराख्नु पर्दैन ।
व्यवसाय गर्न सजिलो हुन्छ र विवाहितहरुको हकमा जापानी पार्टनरसँग पारपाचुके भइसकेपछि पनि जापानमै बस्न तपाइलाई कसैले छेक्न सक्दैन । स्थायि भिसा भएकाहरुलाई रियल इष्टेट खरिद गर्न ऋण पाउने सम्भावना पनि बढ्छ ।
तीन प्रमुख कानूनी आवश्यकता
२.स्वतन्त्र जीबनयापनका लागि पर्याप्त सम्पत्ति वा क्षमता
३.व्यक्तिको स्थायि बसोबास जापानी हितअनुसार निर्धारण हुन्छ
तपाइ कानूनी झमेलामा परेका हुनुहुँदैन । जापानको प्रचलित कुनैपनि कानून मिचेको हुनुहुँदैन । अवैधानिक गाडि पार्किङ गरेर प्रहरीमार्फत चिट पाउनुभएको जस्ता कुराले पनि समस्या पार्छ । समग्रमा रेकर्ड क्लियर हुनुपर्छ ।
स्पाउज (जापानी नागरिकका श्रीमान वा श्रीमती) भिसामा भए ३ वर्षको र वर्किङ भिसामा रहेकाले पाँच वर्षको कर सूचना (ट्याक्स पेपरहरु) पेश गर्नुपर्छ ।
स्थानिय महानगरपालिकाका लागि आवासिय कर (रेसिडेन्स ट्याक्स) सबैमा भिन्दा भिन्दै हुन्छ ।
– स्पाउज भिसाः हाल ३ वर्ष (पहिले एक बर्षको बुझाए हुने)
– दिर्घकालिन भिसाः ५ वर्ष (पहिले तीन बर्षको बुझाए हुने)
– वर्किङ भिसाः ५ वर्ष (पहिले तीन बर्षको बुझाए हुने)
तपाइले सबै ५ वर्षका लागि (स्पाउज भिसाका लागि तीन वर्ष) को खाजेई सोमेइस्योउ र नोजेई सोमेइस्योउ बुझाउनु पर्छ । यसको अर्थ के हो भने तपाइले विगत ५ (३) वर्षमा पर्याप्त आम्दानी भएको र राम्रोसँग कर तिरेको हुनुपर्छ । सबै कर तिर्नु मात्रै पनि पर्याप्त हुँदैन । ती म्याद सकिनु अगाडि नै तिरेको प्रमाण हुनुपर्छ ।
राष्ट्रिय कर भुक्तानी प्रमाणपत्र पनि आवश्यक दस्तावेज हो । यदि तपाइको निजी व्यवसाय छैन र कुनै कम्पनीको मालिक तपाइ होइन र विरासतमा पाएको सम्पत्ति पनि तपाइसँग छैन भने चाहिँ यो परिवर्तनले तपाइलाई खासै असर गर्दैन । तर कर कार्यालयबाट कुनै कर भुक्तानी छली नगरेको प्रमाण दिन राष्ट्रिय कर प्रमाणपत्रको भने आवश्यक पर्छ ।
स्थायि रेसिडेन्सीको बारेमा सोच्नुभएको छ भने कर त तिर्नैपर्छ । कुनै नतिरेको कर छ भने पनि स्थायि भिसा आवेदन पेश गर्नु अघि सबै तिरिसक्नुपर्छ । आवेदन दिँदा धेरैजनालाई डिपेण्डेण्टको सूचीमा पनि राख्नु हुँदैन । आमा बुवा, छोराछोरीसम्म राख्नु ठिकै हुन्छ तर ट्याक्स घटाउनैका लागि नेपालमा रहेका दाजुभाई–दिदीबहिनी वा आफन्तको नाम नराख्नुहोस् ।
विजनेश भिसा भएकाहरुका लागि त झन ट्याक्स तिर्नैपर्ने कुरामध्ये एक हो । स्थायि रेसिडेन्सीका लागि प्रयाप्त आम्दानी चाहिनेहुँदा कम्पनी घाटामा गएको देखिन्छ भने आवेदन स्वीकृत हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
कर सूचनासँगै कम्तिमा पनि दुई वर्षसम्मका लागि स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको प्रमाण पनि पेश गर्नु पर्छ । स्थायि भिसा आवेदन दिनका लागि यो जरुरी छ ।
जापानमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा (कोकुमिन खेन्कोउ होकेन) र कम्पनीले आबद्ध गराउने बीमा (स्याकाई होकेन) गरी दुई प्रंकारका स्वास्थ्य बीमा छन् । कुनै कम्पनीमा काम गर्नु हुन्छ भने उसैले तपाइको स्वास्थ्य बीमा गरिदिन्छ तर केही केही कम्पनीले यो सेवा नदिने भएकाले आफैं यसमा संलग्न हुनुपर्छ ।
धेरै समयअघि नागोया अध्यागमनमा मात्रै पीआर आवेदनका लागि पेन्सनको आवश्यका पथ्र्यो भने हाल यो जापानभरी नै लागू भएको छ । अध्यागमनले तपाइ पेन्सन प्रणालीमा आबद्ध भएको र कम्तिमा पनि दुई वर्ष पेन्सन तिरेको प्रमाण माग्छ ।
जापानमा २० वर्षभन्दा माथिका जोकोहीले पनि पेन्सन तिर्नैपर्छ । पीआर आवेदनका लागि यो पनि आवश्यक छ । संलग्न नभएको भए आवेदन दिनुअघि संलग्न भइसक्नुपर्छ र ढीलो हुनुको कारण पनि पेश गर्नु पर्छ । साधारणतयाः एक व्यक्तिको पेन्सन मासिक १६ हजार येन हुन्छ ।
आर्थिक रुपमा स्थिर
स्थायि पीआर आवेन दिन स्वतन्त्र रुपमा बाँच्नका लागि आफूसँग पर्याप्त क्षमता र सम्पत्ति भएको प्रमाण पेश गर्नु पर्छ । यसमा कुनै सिमितता त तोकिएको छैन तर कम्तिमा पनि मासिक आम्दानी २ लाख ८० हजार येन हुन आवश्यक छ । यदि तपाइका डिपेण्डेण्टहरु छन् भने बढी आम्दानी हुन पर्छ ।
स्पाउज भिसा भएकाहरुलाई आर्थिक स्तर त्यति महत्वपूर्ण छैन । तपाइका डिपेण्डेण्टहरुले अनुमति पाएभन्दा बढी समय काम गरेको हुनु हुँदैन । बुझाइएको आवेदन सहि भएको सुनिश्चित गर्न अध्यागमन विभागले तपाइको घरमै आएर निरिक्षण पनि गर्न सक्छ ।
यदि तपाइ स्पाउज भिसा होल्डर हो भने आफ्नो स्पाउजसँग बसेको हुनुपर्छ । वर्किंग भिसा भएकाहरुले भिसाअनुकूल जागिर छ की छैन पनि उनीहरुले जाँच गर्छन् । तपाइको भिसाले जुन कामको अनुमति दिएको छ तपाइले सोही काम गर्नुपर्छ ।
जापानमा कम्तिमा १० वर्ष बसेको हुनुपर्छ !
स्थायि भिसा आवेदन दिन जापानमा कम्तिमा पनि १० वर्ष लगातार बसेको हुनुपर्छ । १० वर्षको बसाइमा कम्तिमा पनि ५ वर्ष काम गरेको हुनैपर्छ ।
यदि पहिले जापान आउँदाको भिसामा केही समस्या भएर वा अन्य केही कारणले नेपाल फर्केर फेरि नयाँ भिसामा आउनुभएको भए अघिल्लो जापान बसाई जोडिदैन । बीचमा कुनै कारण बिना जापान बाहिर लामो समय बसेको छ भने केही अप्ठ्यारो हुन सक्छ । तर यसका केही अपवादहरु पनि छन् ।
स्पाउज भिसा होल्डर हो भने विवाह भएको ३ वर्ष र जापान बसेको १ वर्ष भए स्थायि भिसा आवेदन दिन पर्याप्त हुन्छ । विशिष्ट कौशल भएका विदेशीहरुका लागि पनि अन्य नियमहरु छन् ।
लामो अवधिका लागि बस्ने अनुमति पाएको
तपाइको हालको रेसिडेन्स स्टेटसले तपाइलाई अधिकतम समय जापान बस्न पाउने अनुमति दिएको हुनुपर्छ । यो अवधि पहिला तीन वर्ष रहेकोमा हाल यसलाई संसोधन गर्दै प्राय भिसा स्टाटसहरुमा पाँच वर्ष बनाइएको छ ।
यसको मतलव तपाईले स्थायि रेसिडेन्सीका लागि आवेदन दिंदा तपाईको भिसा ५ बर्ष बसाई अनुमति हुनुपर्छ तर हालसम्म ३ बर्षको अवधीको अनुमति पाएकाहरुको पनि आवेदन भने इमिग्रेशनले लिइरहेको छ ।
सामान्य तर महत्वपूर्ण जानकारी
कर तिर्नु र पेन्सन प्रणालीमा सामेल हुनु तपाईको दायित्वअन्तर्गत पर्छ । यो बाहेक पनि अन्य धेरै दायित्वहरु पूरा गर्नुपर्छ । नियमअनुसार निम्न अबस्थाहरुमा कम्तिमा २ हप्ताभित्र अध्यागमनलाई जानकारी गराउनुपर्ने कुराहरु हुन्छन् ।
– वर्किङ भिसा भएकाले आफ्नो काम गर्ने स्थान परिवर्तन गरेपछि
– विद्यार्थी भिसा भएकाले स्कूल परिवर्तन गरेपछि
– स्पाउज भिसा भएकाले स्पाउजको मृत्य भएपछि वा पारपाचुेके गरेपछि
– नाम, राष्ट्रियता, आदी परिवर्तन गरेपछि
– रेसिडेन्स कार्ड हराएकाले नयाँ कार्डका बनाउका लागि
त्यस्तै आफु बस्दै गरेको सिटि हलमा पनि २ हप्ताभित्र निम्न कुराहरुको जानकारी गराइसकेको हुनुपर्छः
– आफ्नो ठेगाना परिवर्तन गरेपछि
– स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने कम्पनी छोडेपछि
त्यस्तै हरेक फेबु्रअरी र मार्चमा सिटी अफिसमा गई गएको वर्षमा यदि तपाइले दुई ठाउँबाट आम्दानी गर्नुभएको थियो भने तोकुतेई सिनकोकुमार्फत सो बारेको जानकारी गराउनुपर्छ ।
पीआर आवेदनको परिणाम आउन ४ देखि ६ महिना लाग्छ । तपाइले स्थायि भिसा पाउनु अघि हालको भिसाको म्याद सकिन्छ भने त्यसलाई नवीरकण गर्नुपर्छ । तपाइले पीआर आवेदन बुझाइसकेपछि आफ्ना जानकारीमा कुनै परिवर्तन गर्नु छ भने अध्यागमन विभागमा जानकारी गराउनु पर्छ । भिसा अस्विकार भयो भने अध्यागमन विभागमा गएर त्यसको कारण सोध्नुपर्छ । सबै दस्तावेजहरु पूर्व तयारी गर्नुपर्छ ।
आवश्यक काजगातहरु के–के हुन ?
प्राय सबै अध्यागमन कार्यालयहरुले माग्ने साधारण डकुमेन्टहरु यि हुन्:
त्यस्तै करसंग सम्बन्धित डकुमेन्टहरु यि हुन:
त्यस्तै पेन्सनसंग सम्बन्धित आवश्यक डकुमेन्टहरु यि हुन्:
र अन्यमा स्वास्थ्य विमासंग सम्बन्धित आवश्यक कागजातहरु यि हुन्:
( 行政書士WATABE事務所 को सहयोगमा तयार पारिएको जानकारी / Nepaaru.com )